Cryptocurrencies uye nzira nyowani dzekubhadhara | ECommerce nhau
Cryptocurrencies uye nzira nyowani dzekubhadhara
Jose Ignacio | | eCommerce, Nzira dzokubhadhara
Kukura kwemakristpto mari yakange iri imwe yenyaya dzakakurumbira mune zvemari kweanopfuura makore gumi, kubvira pakaburitswa bepa raSatoshi Nakamoto muna2008, umo nzira yekutanga yekubhadhara yakananga pakati pevezera inotaurwa.
Asi kunyangwe paine misoro yenhau nevatsigiri zvakaunganidzwa neBitcoin nemamwe ma cryptocurrensets, kumwe kushoropodza kukuru kwavakaitirwa ndekwekuti havasi mari mune yechokwadi pfungwa, nekuti vane mashandisiro mashoma ekushandisa kupfuura kuve chitoro chehupfumi. kushambadzira.
Kuti macryptocurrencies ave anotendeseka imwe nzira kune fiat mari, ivo vanofanirwa kuita iyo leap kubva pakuve yakakosha kuve nzira inogamuchirwa yakawanda yekubhadhara, zvese online uye mumugwagwa.
1 Iyo nzara ye crypto kubhadhara
2 Maitiro ekugamuchira cryptocurrencies
3 Makadhi akabhadharwa
5 Dhijitari kuchinjana
6 Ndekupi kwekutanga ne Cryptocurrency?
7 Nei uchishandisa Bitcoin?
8 Mari yechizvarwa chitsva
9 Nharembozha cryptocurrency zvikwama
10 Yambuka muganho kubhadhara
11 Mubvunzo wekuchengeteka
Iyo nzara ye crypto kubhadhara
Kunyangwe paine kumwe kunetsekana kwekutanga, zvinoita sekunge tasvika padanho rekusvika kana zvasvika pakuda kushandisa cryptocurrencies sechinhu chekubhadhara. Mabhizinesi anoziva nezvekumanikidza kunoda kuramba kwakakosha sezvo kubhadhara kwezvisikwa zvipenyu nekutambira nzira dzekubhadhara pakubhadhara kuri kuwedzera kuvhurika kune pfungwa yekubvuma mari yemadhora, zvinoenderana nekuwedzera chishuwo chevatengi nekubhadhara mu crypto.
Parizvino 6% yemabhizimusi epamhepo anotambira cryptocurrencies (kumusoro 9% muUS), asi vamwe 15% vane vavariro dzekuvatambira mumakore maviri anotevera. Iyi 250% yakafanotaura kuti kuwedzera kwemitengo yekutambira ndiyo yakakwira kupfuura chero nzira nyowani yekubhadhara, pamberi pemabhadharo ekubhadhara (156%), makadhi ekuvimbika (127%), uye kuburikidza nekushandisa nhare (116%).
Asi kuda kutora cryptocurrencies senzira yekubhadhara uye kugona kuzviita hazvina kufanana; Kana macryptocurrencies ave kuda kutsemura senzira yekuwedzera yekubhadhara, sekuratidzira kwataita, saka makambani anofanirwa kuronga nzira yekubatanidza kugamuchirwa kwemakristpto mumabhuku avo emari zvakanaka, uye vasingakanganisi mabhadharo avo aripo ekuripa. Unogona kugamuchira.
Rwendo urwu rwunotanga nekudyidzana nemubhadhari webasa rekubhadhara wakakodzera uyo unopa sevhisi account account iyo inosanganisira macryptocurrencies mukati mekubhadharisa nzira dzayo dzekubhadhara. Nemubatsiri webasa rekubhadhara chairo, vatengesi vanogona kugamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara kuburikidza nekubatana kumwe chete, kuri nyore; Kusanganisira madhijitari akadai seBitcoin musanganiswa yekubhadhara ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekusanganisa maBitcoin ekubhadhara pakubuda.
Maitiro ekugamuchira cryptocurrencies
Skrill Quick Checkout ndeimwe yemasanganiswa ayo anopa vatengesi chinhu ichi. Nokubatanidza Skrill Quick Checkout, bhizimusi repamhepo rinogona kubatanidza mazana enzira dzekubhadhara pakubuda kwavo panguva imwe chete iyo inogona kusarudzwa uye kusarudzwa kuburikidza nematurusi eakaundi yavo yekutengesa; uye kugona kubvuma mari yemadhora inosanganisirwa mune idzi sarudzo.
Nekudaro, kuburikidza nekubatanidzwa uku uye kusarudzwa kwemakristpto mari, vatengesi vepamhepo vanogona kukurumidza kuisa mari dzakadai seBitcoin munzira dzavo dzekubvuma dzavanogamuchira, kuitira kuti kugamuchirwa kwavo kwetsika nzira dzekubhadhara kana dzimwe nzira dzisiri dzimwe dzakakanganiswa.
Kubva pamaonero evatengi, iko kushandiswa kwemakristpto madhora ekubhadhara hakubvi pakuti mutengesi agone kuzvigamuchira. Pane kudaro, tarisiro yavo iri pakukwanisa kutora hupfumi hwavainadzo mu crypto portfolio yavo voiisa mukushandisa chaiko kuburikidza nekushandisa mune chaiko nyika.
Imwe nzira yekuita izvi kupa crypto chikwama vanobata mukana wekubatanidza account yavo kune prepaid kadhi. Zvakafanana nekadhi rakabhadharwa kare rakabatana nechikwama chemadhijitari, izvi zvinobvumidza varidzi veaccount dhipoziti kuti vatenge vachishandisa zvirimo muaccount yavo nekukasira vasina kushandurudza mari yavo kuenda kune imwe mari, inogona kuita nzira yakareba uye inodhura.
Pakutanga mwedzi uno takazivisa kadhi rekubatsira kudyidzana neCoinbase iyo inobvumidza varidzi veakaundi yeCoinbase kuUK kuti vaite izvozvi. Kadhi reCoinbase debit rinoshandura mari pakarepo kuita mari yefiat parinoshandiswa uye riine mashandiro ese echitoro chekadhi rechinyakare, zvichireva kuti vatengi vanogona kuita mari yekutaurirana kana EMV (Chip & Pin) nevose. Vatengesi vanotambira VISA kiredhiti kadhi kubhadhara , uyezve nekuita mari kubvisa kubva kumaakaundi eCoinbase kubva kuATM. Vatengi vanogona zvakare kubhadhara kune chero epamhepo cashier iyo inogamuchira echinyakare kiredhiti uye madhibhiti makadhi.
Iyo Coinbase debit kadhi, iyo ichave ichiwanikwa kune vanobata maakaundi muEurope yese munguva yakafanira, inosanganisirwawo kune mobile application iyo inobvumira vatengi kuti vasangosarudza chete iyo cryptocurrency yavanoda kushandisa, asi zvakare inopa kune vashandisi kushandisa pfupiso, maretiiti uye zviziviso zvekuvaudza zviri nani nezve maitiro avo ekutenga uye bhajeti yavo.
Iko mukana weiyo prepaid kadhi modhi ndeyekuti kambani haidi kufunga nezveiyo cryptocurrency iri mubhokisi rayo munzira ipi neipi; Sezvo mari inoshandurwa zvisina musaruro kuita mari yefiat mushandirapamwe usati wapedzwa, hapana kusangana kutsva kunodiwa kunze kwekugamuchira vhiza kadhi kubhadhara, zvichiita kuti mhinduro iyi iwedzere uye ibatsire zvakanyanya kune vatengi.
Kubudikidza nedzimwe nzvimbo dzekubhadharisa, senge Skrill Fast Cash Bhokisi uye Coinbase Debit Card, indasitiri-inotungamira vanopa rubatsiro sePaysafe vari kushandura mari dzemadhora kubva pakuva chigadzirwa chevatengesi.kana chitoro chepfuma uye enda kune chaicho nyika. Kunyangwe isu tichiri kure kure kubva pakuona cryptocurrencies ichishambadzirwa kwese kwese sekugamuchirwa muzvitoro kana online, izvo zvinoshanda zvinogonesa kutenga muBitcoin kuri kuuya.
Kutaura chokwadi, izvi zvekubhadhara zvitsva, izvo zviri kufambiswa nekukura kwechido chevatengi nemabhizinesi kushandura mari yemadhora, zvicharamba zvichichinja nekuwana mukurumbira sezvavanopinda mukuziva kuruzhinji nekushandiswa kwemakristcheni ekuti vaite.
Zvimwe zvezvinetso neBitcoin zvakanyanyisa, kunyanya kusagadzikana kwayo, zvinogona kukanganisa kuitirwa kwavo, ndosaka tichidavira kuti mabhawoni anogona kupa mhinduro yekupedzisira mukushandiswa kwakawanda kwecryptocurrency kubhadhara, tandem neakasanganiswa online vanobhadhara mari uye makadhi akabhadharwa kare.
Iko kuchinjana kwekukosha muchimiro chemari nemari kwave kuita kwakakosha kubvira nakare-kare. Izvo zvinongo gadzira musiyano mukuchinja mafomu muhupenyu hwevanhu. Iyo nzira nyowani yekutsinhana yatora chimiro sezvo tekinoroji yagadzira nzira yayo nekufamba kwenguva. Asi ko crypto mashandisiro anogona kuchinja ramangwana rekubhadhara kwedijitari?
Cryptocurrency inzvimbo yekutsinhana yedhijitari inoshandiswa pakutengeserana kwemari. Iyo cryptocurrency inopa masimba blockchain tekinoroji kuti ibudirire pachena, kusachinjika, uye kuisirwa masimba.
Iyo cryptocurrency inonyanya kudzorwa nevakuru masimba uye inowira pasi pekutonga kwehurumende. Iyo inzira inoshanda kwazvo yekutsinhana kukosha, uye inogona kutumirwa pakati pemapato maviri, kungave pachivande kana kushandisa mhinduro dzeveruzhinji.
Zvinogona kuve zvakaoma kutumira uye kugamuchira muhomwe hombe yemari, ndosaka macryptocurrencies ari echiso chitsva chemari mubhizinesi rako.
Vanhu pasirese pasirese vanoshandisa iyo nzira yecryptography, uye iri chaizvo inobatsira zvakare. Nekubatsira kwekrispto-mari, mari inogona kuchinjaniswa nekukurumidza. Cryptocurrency inongova iro ramangwana rekubhadharwa kwedhijitari, uye nekudaro rine simba rakasimba pasisitimu yehupfumi hwenyika.
Mune ino chinyorwa, isu tichakurukura iwo mapoinzi zvine chekuita nemubatsiro wemakristcheni uye nei chingave chakakosha kubatsirwa kwemaindasitiri nemabhizinesi. Muchikamu chino, iwe uchaona mashandisiro e cryptocurrency neBitcoin achakurumidza kusimbiswa nemabhizinesi.
Ndekupi kwekutanga ne Cryptocurrency?
Cryptocurrency inzira yekushandura yako yakajairwa mari system kune Bitcoins. Makambani mazhinji uye mazhinji ari kuchinjira kune iyo cryptocurrency nzira yekukurumidza uye isina mari yekubhadhara mabhenefiti.
Bitcoin iri chaizvo mhando yemari iyo inosanganisira ese mashandiro senge yekutengesa kugadzirisa, kuongorora kunoda kuve kunogoneswa netiweki. Aya maBitcoins akagadzirwa nedhijitari kuburikidza nemabatirwo emigodhi, uye anodawo makomputa anoshanda chaizvo uye akasimba kusunungura manhamba akaomarara, nema algorithms.
25 bitcoins inogadzirwa maminetsi gumi ega ega. Mari yeBitcoins inoenderana chete nevashambadziri uye nezvavanoda kubhadhara panguva iyoyo. Iyo zvirokwazvo iri nyore nzira yekutengesa mari, uye kana iwe uine chiyero chema bitcoins, saka haugone kudzosa.
Ivo vanhu vanogona kushandisa zvibvumirano zvakangwara uye zvinowedzera hukama hwevezera apo vasina ruzivo rwekuzivana.
Makambani makuru senge Expedia, eBay, uye Microsoft vanoshandisa cryptocurrency sezvo ichave iri ramangwana reanenge makore gumi anotevera.
Bitcoin inongova ramangwana nekuti fiat mari inozopedzisira yarasikirwa nemutengo wayo nekuda kwekudhinda-pamusoro. Iko kune tsika yefiat mari yekuwira zero uye isina kukosha.
Kune mikana yekuderera, uye imwe nyika inogona kuve nehupfumi hwehupfumi. Cryptocurrency imari inoshanda, uye inoderedza njodzi yemhando dzese dzehunyengeri. Izvo zvinokwanisika kutsvaga kwekutanga kwechigadzirwa nerubatsiro rwe blockchain tekinoroji.
Nekuda kwekukwira kwekubiridzira kwepamhepo uye kutyisidzira kwakakomba kubhizinesi, Cryptocurrency haisati yawana kuzikanwa. Hurumende dziri kupota dzichipinda muchirevo cheBitcoin. Iko kune chaiko pasina mubhadharo kuburikidza neBitcoin uye zvese zvikwereti zvinoitwa nemazvo zvakare.
Nei uchishandisa Bitcoin?
Iyo iri mari yemadhijitari iyo yakasikwa muna2009. Zviyero zveBitcoin zvinochengetwa mubhuku reruzhinji ririmo mugore. Iko hakuna kutsigirwa nehurumende kweBitcoins, uye ivo havana kukosha zvakanyanya pane zvigadzirwa.
Machati eBitcoin anozivikanwa kwazvo, uye izvo zvakatungamira mukuburitswa kwemamwe mairi mari pachikuva, uye vanozivikanwa kune mumwe nemumwe seAltcoins. Mutengo weBitcoin unonyanya kuvimba nesaizi yenetwork uye zvakare zvakanyanya kuoma.
Mitengo yeBitcoins ichawedzera zvinoenderana nemutengo wekugadzira. Iko kuwanda kwesimba rekupa kweBitcoins yekuchera network inozivikanwa seye hash rate, iyo inoreva kuwanda kwenhamba mune yechipiri iyo network inogona kuyedza kupedzisa dambanemazwi pamberi pebhokisi kuti riwedzerwe kuBlockchain.
Mari yechizvarwa chitsva
Mafomu chaiwo emari anogara achishandiswa nevanhu nekuda kwekuchimbidza kuchinjisa uye nzira dzekushanda. Naizvozvo, kukwereta chikwereti uye debit kwakakosha kuti ubhadhare. Cryptocurrency ichiri pfungwa isinganzwisisike zvakanyanya, sezvo vanhu vachinyanya kuvimba nekuchinjiswa kwebhangi.
Nekudaro, kunyorera kwakadai saSikwere, Circle uye Revolut kwakabatanidza kutenga uye kutengesa kwekrispto-mari. Unofanirwa kutsvaga zvimwe nezve fomu rakapetwa rekushambadzira iro rinogoneka kuburikidza nezvivakwa uye izvo zvinogona kukwezva vatengi vatsva nguva nenguva.
Aya maapplication epamhepo anobatsira kubhadhara nekutenga kuburikidza nemari chaiyo uyezve nekuteedzera emisika ye cryptocurrency kuburikidza nekushandisa kumwe chete. Aya ma tokeni edhijitari anofananidzwa nemari chaiyo uye akafanana chaizvo uye uye nekuda kweizvi, mhando nyowani yemushandisi inokwezva kumusika we cryptocurrency.
Mabhizimusi ari kuenda kumberi kwekuchigamuchira iwo mukana uye kuve nechokwadi chekuti mari / mari inochinjiswa inokurumidza uye zvirinani futi.
Nharembozha cryptocurrency zvikwama
Iwe unofanirwa kunge wakanzwa nezve masevhisi akaita sePayPal, Android mubhadharo, uye Apple kubhadhara izvo zvinopihwa mari nechikwereti uye makadhi ekubhengi. Asi kana iwe uine Blockchain saka unogona kushandisa zvakavharirwa zvikwama uye hazvifanirwe kuve zvakabatana nechero imwe account, kuwedzera kune iko nyore kushandisa kwechikwereti kadhi wallets.
Iyo crypto-chikwama inzira inokurumidza, yakapusa uye isingadhuri yekushandisa mari yako. Iwe une muripo wakabhadharwa uyo unopa nhare mbozha uko vashandisi vanogona kubata nekuchengetedza mari yavo.
Izvo zvinobatsira uye zvirinyore kune vashandisi kutumira uye kugamuchira yavo huwandu kuburikidza neBitcoin uye kune nzira dzekuchinjana mapaundi nemaeuro mune bitcoin app chimiro. Zviri nyore uye zvakapusa nekuti munhu anogona kusarudza kubhadhara kuburikidza nema bitcoins kunyangwe kana vatengesi vachigamuchira mari ye fiat.
Mapurogiramu matsva anosanganisira makadhi ekubhadharira ma bitcoins pamwe nezvimwe zvirongwa zvekudzidzisa futi. Makambani akaita seCryptopay anounza Bitcoin banking kune yepasi rose yekutengesa nhanho.
Yambuka muganho kubhadhara
Chimwe chezvinhu chakakosha pazvinhu zvekuyambuka-pamuganho kutengeserana ndeyekunyora uye blockchain. Nekushanduka kwe blockchain, aya mapuratifomu anogona kuyera chaiwo kuendesa uye kutengeserana munguva chaiyo.
Kusiyana neyakajairwa mafiratendi mashandisirwo, aya anowanzo fambiswa kuburikidza nekuchenesa dzimba uye dzakasiyana nzira dzekubhadhara. Naizvozvo, sekuvharwa kwe blockchain kunoitika mukati mehurongwa, zviitiko zvinogona kupedzwa nekukurumidza kupfuura chero chimwe.
Kuve yakatemerwa nzvimbo, iyo blockchain inogona kuve nyore kwazvo kuchengetedza uye vanopa vanogona kudzikisa mutengo wekushanda.
Pamusoro pezvo, Bitcoins inotumirawo mari inotumirwa iyo inoratidza huwandu hwenyika nevashandi vanoenda kune dzimwe nyika. Vashandi vanogona kutumira mari yavo kumusha vachishandisa nzira ye blockchain uye inodhura kupfuura Western Union.
Kana usina mari, mikana yekuchengeta mari yako yakachengeteka yakakura nekuti mari yemuviri inogona kurasika kana kubiwa. Vashandisi vanoshandisa mari vakachengeteka uye vakachengeteka nekuti kunyangwe vakarasa nharembozha, mari dzavo dzakachengeteka mune avo nharembozha. Uye chikwama chinofamba chinochengetedzwa nematanho mazhinji ekuchengetedza.
Kuchengetedzwa kunosanganisirwa mukushandisa uye matanho ekuchengetedza efoni kuitira kuti mari irambe yakasimba mugore.
Kunyangwe paine paine mamwe matambudziko mukutyorwa kwedata, simba rekuchengeteka riri pamusoro pekusvikwa nevanyengeri. Vashandisi veBitcoin havafanire kuburitsa mazita avo echokwadi ekugamuchira kana kutumira bitcoins.
Zvese zviitiko zvinoteedzana zviri nyore kuburikidza ne blockchain. Nekwakakodzera kuwedzerwa, blockchain masevhisi anogona kudzorwa nehurumende. Kuchengetedza kunetsekana kukuru kana zvasvika pakutengeserana kwemari uye nekudaro blockchain inogona nyore kupa ruzivo rwekupedzisira-mushandisi uye kuvimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Cryptocurrencies uye nzira nyowani dzekubhadhara
Ungatengesa sei paAmazon
3 mazano ekugadzira mafomu anokwezva ebhizinesi rako repamhepo